Koobka Champions League-ga oo laga dejiyey magaalada Cardiff… + SAWIRRO – Gool FM
Koobka Champions League-ga oo laga dejiyey magaalada Cardiff… + SAWIRRO
(Cardiff) 22 Abriil 2017 – Koobka Champions League ayaa la gaarsiiyey magaalada Cardiff, halkaasoo lagu ciyaari doono kama dambaysta koobkan.
Halyaygii xulka qaranka Wales iyo kooxda Liverpool ee Ian Rush ayaa hogaamiye ka ahaa wafdigii ka socday Wales ee koobka Champions League-ga gaarsiiyay dalkaasi Wales.
Ian Rush ayaa koobkan Liverpool kula soo guulaystay sanadihii 1981-kii iyo 1984-kii ,laakiin waxa uu dareen gaar ah ku tilmaamay inuu koobkan u soo qaaday magaalada Cardiff ee uu ka dhici doono final-ka Champions League-ga xili ciyaareedkan.
Kooxaha Real Madrid, Juventus, Atletico Madrid iyo AS Monaco ayaa isugu soo haray afar dhammaadka Champions League, waxaana final-ka koobkan lagu ciyaari doonaa garoonka xulka qaranka Wales ee magaalada Cardiff.
Horyaalka Talyaaniga oo sanadka soo aaddan loo isticmaali doono hannaanka VAR (Waa maxay?)
Kooxda Manchester City oo ku soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa Griezmann